Ejipta: Graffiti Mameno ny Tambohon’ny Lapam-Panjakana iasan’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Graffiti Mameno ny Tambohon'ny Lapam-Panjakana iasan'ny Filoha
Voadika ny 13 Desambra 2012 17:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, عربي, русский, polski, Français, Aymara, македонски, English
Tahaka ny tsara kosoka indray ny fisainana revolisionera ao Ejipta, noho ny fandrobaham-pahefana nataon'ny filoha Mohammed Morsy – ilay fanapaha-keviny vao haingana manitatra ny fahefany. Niteraka hetsi-panoherana nanerana ny firenena ny fanapaha-kevitra, ary ny nalaza indrindra dia ny sit-in natao manodidina ny Lapam-Panjakana.
Ny mpaka sary Jonathan Rashad, izay navitrika tamin'ny fampiasana ny fakan-tsariny hanangonam-baovao tamin'ny hetsika lehibe hatry ny fanombohan'ny revolisiona ejipsiana, no nizare ireo sarina graffiti manaraka ireto izany milaza ny tantara ao amin'ny kaonty Flickr.
Graffiti mampiseho ny filoha Morsi ho orita milomanao anaty ranomasin-drà. (CC BY-NC-SA 2.0)
‘miala, ondry’ manondro ny Filoha Morsi, milaza an-kolaka ny rebik'ondry fihetsiky ny Mpirahalahy Miozolomana. (CC BY-NC-SA 2.0)
‘Mialà ry adala’
‘Tsy ara-drariny’ (CC BY-NC-SA 2.0)
Famotsipotserana ny polisy miaramila, voampanga ho manao fandikana goavana ny zon'olombelona tamin'ny fidarohana ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny vanim-potoanan'ny tetezamita ao Ejipta (CC BY-NC-SA 2.0)
Nisy nanafika ny sit-in teo anoloan'ny lapam-panjakana tamin'ny 5 desambra, izay niafara tamin'ny fahafatesana 6 sy ireo maro maratra. Nivoaka taty aoriana ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpanao fihetsiketsehana anti-Morsi nampijaliana teo am-pelatanan'ny mpanohana an'i Morsi. Maro ny tamboho natsangana manodidiina ny lapam-panjakana hisorohana ny fanatonan'ny mpanao fihetsiketsehana. Tratran'ny graffiti an'ny artista koa ireny mazava ho azy.
‘Tsy maharo anao amin'ny revolisionera ny rindrinao’ (CC BY-NC-SA 2.0)